Kulliyadda Tababarka Macalimiinta GTEC oo ay ka qalinjabiyeen 82 Gabdhood | GTEC
Garoowe:-Kulliyadda Tababarka Macalimiinta GTEC (Garowe Teacher Education College ) ayaa waxaa ka qalinjabiyay 82 Gabdhood kuwaas oo qaatey Waxbarashada Dugsiga Sare.
Maamulekuxigeenka Kulliyadda Cabdiraxmaan Shiikhdoon ayaa waxa uu sheegey in gabdhahan oo ah kuwo aan dhammeysan Dugsiga sare oo dhexdaga kaga jirey ay muddo hal sano gudaheed ah ay ku qaateen dhammaan intii looga baahnaa Dugsiga sare ee 4-ta sano, waxaana uu u mahad naqay dhammaan intii kala qeybqaadatay oo ay ka mid yihiin Wasaaradda Waxbarashada, Diakonia iyo AET.
Cumar Ciise (Faaruuq) madaxa suuqgeynta Shirkadda Golis ayaa aad u soo dhaweeyay gabdhaha qalin-jabiyay waxaana uu sheegey in ay tahay Waxbarashaddu waxa kaliya ee Ummaddi ku horumarto, sidaasdarteed Shirkadda Golis ay taageerto Waxbarashada iminkana diyaar ay u tahay gacan ka geysashada Waxbarashadda.
Wasiirka Horumarinta Haweenka iyo Arimaha Qoyksa Marwo Caasho Geelle Diiriye oo shahaadooyin guddoonsiisey Ardeyda qalinjabisey ayaa waxay sheegtey in ay tahay wax lagu faano in halmar ay qalinjabiyaan 82 Gabdhood, waxeyna hoosta ka xariiqdey in Waxbarashadu ay dalka taal ee aysan ahayn in dalal shisheeyo loo aado amaba badda looga tallaabo oo nafta loo haligo.
Kulliyadda Tababarka Macalimiinta ee Garoowe ayaa waxay soo saartaa macalimiin tababaran kuwaas oo wax ka dhiga Iskuulaadka Puntland.